musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Stephen Asiimwe kutungamira Uganda Private Tourism Sector
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Uganda Breaking News • Wtn
Board of Directors reUganda Private Sector Foundation inozivisa kugadzwa kwaVaStephen Asiimwe, se Executive Director mutsva.
Vanotsiva mushakabvu VaGideon Badagawa avo vakashaya muna Chikumi gore rino.
VaAssimu mutungamiri anozivikanwa weUganda Tourism uye anoremekedzwa pasi rose. Chiso chake chaive chiso cheUganda Tourism kumaratidziro nezviitiko zvakawanda zvekufamba uye zvekushanya, apo kubva 2014 kusvika 2019, Asiimwe akashanda semukuru mukuru kuUganda Tourism Board (UTB).
VaFrancis Kisirinya vanga vari acting executive director kubva pakashaya Badagawa gore rino muna Chikumi.
Sekutaura kwasachigaro webhodhi rePSFU, Dr. Elly Karuhanga, kugadzwa uku kunotanga kushanda nekukasika. Asati agadzwa, Asiimwe aive director wepolicy nekusimudzira bhizinesi kuPSDU.
Ane ruzivo rwekutapa nhau, aive mukuru mukuru uye Mupepeti-Mukuru weEast African Business Week kubva 2004 kusvika 2014. Akashanda zvakare kuNew Vision semutori wenhau, sub-editor, uye Business Editor kubva 1993-2004.
Ane Dhigirii reMasters muOrganization Leadership and Management kubva kuUS-based Development Associates International (DAI) yakabatana neUganda Christian University (UCU). Akaitawo bachelor's graduate muSocial Sayenzi akapedza kudzidza Political Science uye Sociology kubva kuMakerere University.
Asiimwe ane makore makumi matatu eruzivo mune ese ari maviri ehurumende neakazvimiririra pamanejimendi, hutungamiriri, uye hutungamiriri hwebhizinesi.
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi vakakorokotedza VaAssimu. Izvi zvakatsinhirwa naJuergen Steinmetz, sachigaro webato World Tourism Network, uye muparidzi we eTurboNews: “Mr. Asiimwe anga ari shamwari kwemakore akawanda. Ndine chivimbo chekuti kugadzwa uku ibudiriro huru kwete kuna Stephen chete, asi kuUganda Tourism zvachose. "